Uhlobo Lwe-Rotary Umshini Wokugcwalisa i-Lip Gloss
Push Uhlobo Mascara Ukugcwalisa Umshini
Umshini Wokugcwalisa I-Nail Polish Nokwenza Umshini
Umshini wokugcwalisa umshini we-Nail othomathikhi
Umshini wokugcwalisa ukhilimu we-Swirl
Umshini wokugcwalisa umshini womoya
Cindezela Uhlobo Lokushisa Ukuxuba Umshini Wokugcwalisa iMascara
Uhlobo Lwe-Rotary Ukushisa Ukuxuba Umshini Wokugcwalisa i-Lip Gloss
Umshini Wokugcwalisa Umshini Owodwa Oshisayo
Umshini wokugcwalisa i-Lip Balm othomathikhi
Umugqa Wokugcwalisa I-Balm Lip Balm
Umugqa Wokugcwalisa I-Lipstick okuzenzakalelayo
Umugqa Wokukhiqizwa Kwe-Silicone Mold Lipstick Production
Okuzenzakalelayo Umhubhe Freezer
Umshini Wocindezela I-Powder
EGCP-08A Auto Powder Ukucindezela Machine
Umugqa Wokubhaka Powder Obhakwe
Umshini Wokugcwalisa I-Powder Okuzenzakalelayo Okuzenzakalelayo
Umshini Wokugcwalisa I-Powder Okuzenzakalelayo
I-EGPM-30L Cosmetics Powder Mixer
Muhle Powder Pulverizer
Umshini we-Hydraulic Lab cosmetic Powder Press
Umshini Wokunyathelisa We-Servo Motor Lab Powder Press
Okuzenzakalelayo Production Line
Umshini Welebula Wamalebula Amabhodlela Ase-EGRL-200
Umshini Wokubhala Ophezulu we-220
Umshini Welebula we-EGHL-400 ovundlile
Ovundlile Ngezansi Umshini
Umugqa wokukhiqiza we-powder obhakwe
ngomphathi ku 21-01-06
Okokuqala, ukuxuba, 1 setha ithangi lokuxuba elingu-20L; Isivinini Ukuxuba kungaba adjustable; Isixhumi sesikhuhli sikhumula kalula futhi sakha kabusha; Isikhathi se-CW nesikhathi seCCW siyashintsha; I-Tank ingavula i-90degree ukukhishwa kalula okwesibili, i-extrusion, i-1 set 10L tank; Intulo kusuka ohlangothini lwangemuva futhi ucindezela ...
2020 CBE eShanghai idokodo inombolo N4-H21
Ngo-2020, siya embukisweni we-CBE eShanghai kusuka ngoJulayi 8 kuya ku-12. Sikhombisa imikhiqizo yethu eyinhloko, njengomshini wokugcwalisa i-lip gloss, umshini wokugcizelela i-lip gloss mascara wokugcwalisa umshini, umshini wokucindezela i-compact powder, umshini wokulebula ovundlile, i-packagings yezimonyo ye-lip gloss, l ...
Sakha umshini wokugcwalisa i-swiring we-Estee Lauder
Imodeli EGSF-01A umshini wokugcwalisa i-swiring umshini wokugcwalisa oshisayo othomathikhi owenzelwe ukukhiqizwa kwesisekelo se-liquid kanye ne-toner gel. Ithebula lalo lokujika lenkomba elinama-pucks ayi-12, isiteshi sokusebenza esi-3 Ine-4set ka-10 L yokushisa ithangi nge-mixer Operator yokulayisha ipani / amabhodlela i ...
2020 Disemba Kubuyekezwe umshini wokucindezela i-auto compact powder
Umshini wokucindezela i-Compact powder ungenza isithunzi, iso, ikhekhe lezindlela ezimbili, isisekelo sezimonyo ezicindezelweyo, ubuso obucindezelwe ngobuso. Umshini wethu wokucindezela i-compact powder ungenza i-powder ecindezelwe nxazonke kanye ne-powder ecindezelweyo yomshini owodwa. Umshini wethu wokucindezela umshini we-auto compact uhlobo lwe-rotary mac ...
2020 Okthoba ngomshini wokugcwalisa i-lip gloss, senza ushintsho mayelana namathangi wokushisa ashintsha
Ngokusho kwemfuneko evela kumakhasimende, senza umshini wokugcwalisa i-lip gloss nge-tank yokushisa. I-Heating tank ifakwe i-mixer nedivayisi yengcindezi yokwengeza ingcindezi yoketshezi olunamandla lwe-viscous ukuhamba phansi ngokushelela lapho ugcwalisa. I-tank yokushisa iyitangi lebhantshi, i-heatin iphakathi ...